Musharaxiinta Madaxweyne Qaarkood oo la ogaaday Siyaasada ka Dambeysa in ay isa soo sharaxaan !!(Warbixin) – Kismaayo24 News Agency Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284
Musharaxiinta Madaxweyne Qaarkood oo la ogaaday Siyaasada ka Dambeysa in ay isa soo sharaxaan !!(Warbixin)
by Tifaftiraha K24 19th September 2016 044
Qaar badan oo kamid ah Musharaxiinta ku dhawaaqay in ay u tartamayaan xilka Madaxweynaha Soomaaliya iyo kuwa kale oo doonaya in ay hada kadib ku dhawaaqaan ayaa la ogaaday in aysan daacad ka aheyn in ay xilkaasi u tartamaan.
Musharaxiinta hada ku dhawaaqay in ay u tartamayaan Xilka Madaxweynaha Soomaaliya waxaa ku jira kuwa horey siyaasada dalka ugu soo fashilmay xilal kala duwana kasoo qabtay Dowladihii kala duwanaa ee dalka soo maray.
Baaritaano aan sameynay ayaan ku ogaanay in Musharaxiinta qaarkood ujeedka ay ugu dhawaaqeen in ay u tartamayaan xilka Madaxweynaha Soomaaliya in ay tahay sidii beelaha ay kasoo jeedaan uga helli lahaayeen kursiga Baarlamaanka si loo yiraahdo waa Musharax Madaxweyne ee kursi halagu sharfo.
Musharaxiinta kale qaarkood ayaa ujeedkoodu yahay in ay u ololeeyaan Musharaxiin kale oo u tarmaya xilka Madaxweynaha Soomaaliya sidaasna uga helaan dhaqaale, qaar kale ayaa iyana doonaya in ay ku raadiyaan mansab siyaaasadeed iyo balan qaad xilal dowlada la dhisayo.
Qaar kamid ah Xubnaha ku dhawaaqay in ay yihiin Musharaxiin Madaxweyne ayaa ah kuwa aan saameyn badan ku laheyn siyaasada sidoo kale aanan heesan dhaqaale ay ku tartamaan, waxa kaliya ay awodaan ayaana ah qabashada xaflada ku dhawaaqista Musharaxnimadiisa iyo xaflado yar yar oo lagu taageerayo.
Dad badan ayaa saadaalinaya in Musharaxiinta u tartameysa Xilka Madaxweynaha Soomaaliya ay noqon doonaan kuwa kooban oo saameyn badana ku leh siyaasada dalka, waxaana dadka badi ay saadaalinayaan in Doorashada ay ugu cadcad yihiin Madaxweyne Xasan Sheekh iyo Madaxweynihii hore ee Somalia Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo la filayo in uu ku dhawaaqo in uu Musharax yahay.
Siyaasiyiinta qaarkood ku dhawaaqay in ay u tartamayaan Xilka Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ujeedkoodu yahay in kaliya ay taariikhda u gasho in uu u tartamay xilka Madaxweynaha Soomaaliya, Musharaxiintaas ayaa qaarkood xitaa ku xisaabtameyn in ay helaan codadka Xildhibaanada beeshooda ugu jira Baarlamaanka.
Musharaxiin badan ayaa ku hari doona sharuudaha laga doonayo dadka u tarmaya xilka Madaxweynaha Soomaaliya iyo lacagaha diwaan galinta, halka Musharxiin kalana ay shaacin doonaan in ay tanaasuleen marka ay helaan Kursiga Xildhibaanimo ay markii hore raadinayeen .
KASHIFAAD: Dhageyso Mas’uul DF katirsan oo Lacag Badan Markale ka Xaday Bankiga dhaxe…
Kulanka khamiis laha ahay ee Golaha Wasiirada Galmudug oo looga Amniga iyo siyaasada.
20 kamid ah dagaalyahanada Kooxda Al-Shabaab iyo saraakiil sare oo lagu Xasuuqay gobolka.
Mohamed Abdirashid Abaajo 1st February 2019 1st February 2019